နှင်းပန်းဝါ၀ါလေးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နှင်းပန်းဝါ၀ါလေးများ
Posted by manawphyulay on Oct 1, 2010 in Creative Writing, Drama, Essays.., Poetry, Short Story |2comments
ဒါနဲ့ အင်္ဂါနေ့ရောက်တော့ မနက်ခင်းဟာ အေးစက်ပြီး နှင်းတွေ ခပ်ဖွဲဖွဲကျနေပေမဲ့လို့ ကျွန်မရဲ့ကတိအတိုင်း ဂျူလီတို့အိမ်ကို ကားမောင်းထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်.. ပျင်းရိဖွယ် အချိန်တစ်ချို့ ကုန်ဆုံးအောင် ကားမောင်းလာပြီးနောက် သမီးဂျူလီတို့အိမ်ရောက်တော့ မြေးလေးတွေကို ပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက်ပြီး “သမီးရဲ့ နှင်းပန်းဝါတွေကို သွားကြည့်ဖို့ဆိုတာ မေ့လိုက်ပါတော့လားကွယ်။ ကြည့်ပါဦး အပြင်မှာ နှင်းတွေကျနေပြီး တိမ်တွေကလဲ ထူထပ်နေတာဘဲ။ ဒီလောက်အေးစက်နေတဲ့အချိန်မှာ အိမ်အပြင်ထွက်လာပြီး ခရီးသွားဖို့ဆိုတာ သမီးနဲ့မြေးလေးတွေကို တွေ့ဖို့သာမဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားကိစ္စအတွက်ဆို တစ်လက်မလေးတောင်မှ မေမေ ကားမောင်းလာမှာ မဟုတ်ဘူး” လို့ ဂျူလီ့ကို ပြောလိုက်ပါတယ်..
ကျွန်မလဲ သမီးဂျူလီရဲ့ စကားကို ဘာမှ မတုံ့ပြန်ဖြစ်တော့ဘဲ နှုတ်ဆိတ်ပြီး ကားပေါ် လိုက်လာမိပါတော့တယ်.. ကားပေါ်ပါလာတဲ့ မြေးကလေး ၂ယောက်ကတော့ ဆော့ကစားရင်း ပါလာကြပါတယ်.. မိနစ် ၂၀လောက် ကျောက်စရစ် လမ်းကျဉ်းလေးအတိုင်း ကားမောင်းလာပြီး ဘုရားရှိခိုးကျောင်း သေးသေးလေး တစ်ခုကို မြင်လိုက်ချိန်မှာ ဂျူလီက ကားကို ရပ်လိုက်ပါတယ်.. ဘုရားကျောင်းနဲ့ ခပ်ဝေးဝေး တစ်နေရာမှာတော့ လက်ရေးနဲ့ရေးထားတဲ့ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုဒ် အမှတ်အသားလေး တစ်ခုကို တွေ့လိုက်ပါတယ်.. ကလေးတွေကို လက်ကိုယ်စီဆွဲပြီး အဲဒီဆိုင်းဘုဒ်ညွှန်ပြရာ လမ်းကလေးအတိုင်း ဂျူလီဦးဆောင်ပြီး ကျွန်မတို့တွေ လျှောက်လာခဲ့ကြပါတယ်.. တောင်ပတ်လမ်းသွယ်လေးအတိုင်း လျှောက်လာရာက လမ်းတွေ့တစ်ခုအရောက် မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက ကျွန်မကို အသက်ရှု ရပ်ဆိုင်းသွားမတတ် ရင်သပ်ရှုမော ဖြစ်စေပါတော့တယ်။
ကျွန်မတစ်သက် မြင်ဖူးသမျှ မြင်ကွင်းတွေထဲမှာ အလှပဆုံး မြင်ကွင်းလေးတစ်ခုပါဘဲ။။ တောင်ထိပ်တစ်ခုလုံးနဲ့ တောင်စောင်း တစ်လျှောက်လုံးဟာ ရွှေဝါရောင် ကော်ဇောကြီးတစ်ချပ် ဖြန့်ခင်းထားသလို ၀င်းဝါတောက်ပ နေပြီးတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်က စိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့ လက်ရာမြောက်အောင် သေသပ်လှပတဲ့ ရွှေရောင်ရေဆေး ခပ်များများနဲ့ ရေးခြယ်ထားတဲ့ ပန်းချီကားကြီး တစ်ချပ်လိုပါဘဲ.. ဒါပေမဲ့ အခု မြင်တွေ့နေရတာက တကယ့်သဘာဝ ပန်းချီကား။ တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကို ၀ံ့ကြွားတောက်ပစွာ ရွှေရောင်လွှမ်းခြုံထားစေတဲ့ ပန်းချီဆရာတွေတောင် လက်မှိုင်ချရမဲ့ အလှ။ ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းလွန်းလို့ ကျွန်မဖြင့် အသက်တောင် မရှူမိဘူး ထင်တာပါဘဲ။
ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးကို စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင်တောင် အခု လက်တွေ့မြင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းလောက်တော့ လှပအောင် စိတ်ကူးပုံဖော်တတ်ခဲ့မယ် မထင်ဘူး…. မြင်နေရတဲ့ တောင်စောင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာ အ၀ါရောင် လှိုင်းလုံးတွေ အလိပ်လိုက် ထနေသလို ထင်ရပြီး တောင်စောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကို အလှဆင်ထားလိုက်ပုံက အ၀ါရောင် ဖဲကြိုးတွေ ချခင်းထားသလိုပါဘဲ။ ကျွန်မစိတ်ထဲ ရွှေရောင်ပင်လယ်ပြင်ကြီးတစ်ခု ကိုယ့်မျက်စိရှေ့ကို ရောက်လာသလို ထင်မြင်မိတော့တယ်.. တစ်သက်မှာ တစ်ခါဆိုသလို အလှဆုံးပန်းခင်းကြီးကို တွေ့လိုက်ရတာပါဘဲ… အိုး…….. ဘယ်လိုလူတွေကများ ဒီတောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကို ရွှေရောင် လွှမ်းသွားလောက်အောင် မျက်စိတစ်ဆုံး ကျယ်ပြောလှတဲ့ ပန်းခင်းကြီးကို လာစိုက်ထားတာပါလိမ့်။
ရွှေဝါရောင် ပန်းခင်းကြီးရဲ့အလယ်မှာ ရှိနေတဲ့ အိမ်ကလေးဆီကို ကျွန်မတို့ လျှောက်လာခဲ့ကြပါတယ်.. အိမ်ရှေ့အရောက်မှာတော့ ပေါ်တီကိုမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုဒ်လေးတစ်ခုကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် တွေ့လိုက်ရပါတယ်.. အဲဒီဆိုင်းဘုဒ်မှာ ရေးထားတာက “နှင်းပန်းဝါ၀ါတို့ရဲ့ ဥပဒေသ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေပါဘဲ။ အဲဒီအိမ်ကလေးမှာ ကျွန်မတို့ တွေ့ဆုံခဲ့ရသူ၊ ဒီလောက်များပြားလှသော နှင်းပန်းဝါတွေကို စိုက်ပျိုးထားတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ကျွန်မရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ သူပါဘဲ.. အိုး ကျွန်မအတွက်တော့ သူနဲ့ တွေ့ခွင့်ရတာဟာ မေ့နိုင်စရာမရှိတဲ့ ဘ၀ရဲ့ အမှတ်တရလေး တစ်ခုပါဘဲ. သူ့ဆီက သိပ်ကောင်းမွန်တဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံ၊ သင်ခန်းစာကောင်းလေးတစ်ခုကို လက်ဆောင်ရခဲ့ပါတယ်… ဒီအမျိုးသမီးဟာ ကျွန်မဘ၀တစ်လျှောက် ဘယ်သောအခါကမှ မတွေ့ခဲ့ဖူးပေမဲ့ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်.. နှင်းပန်းဝါကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သူရဲ့ ဆောင်ပုဒ်က “တစ်ကြိမ်ကို နှင်းပန်းဥလေးတွေ တစ်လုံးစီ စိုက်ပျိုးရုံနဲ့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ စိုက်ပျိုးပြီးတဲ့အခါ တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကို နှင်းပန်းတွေ ဖုံးလွှမ်းသွားအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့…”
သိပ်ကောင်းမွန်တဲ့ ဥပေဒသပါဘဲလား။ အားကျလေးစား စံနမူနာ ယူထိုက်လှပါတယ်… ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့ ကိစ္စဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ဘယ်မှာ ရှိပါ့မလဲနော်.. မိန်းမ တစ်ယောက်တည်းက စိုက်ပျိုးထားတာပါလို့ ပြောရင် ယုံနိုင်ဖွယ်မရှိတဲ့ ဒီ ပန်းပင်လယ်ကြီးဟာ တကယ်လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဆောင်တတ်သူ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖန်တီးမှု စွမ်းအားတွေနဲ့ တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကို အ၀ါရောင်တွေလွှမ်းခြုံသွားအောင် ဆေးခြယ်ပစ်ခဲ့တယ်။ ဒီတောင်ကြီးတစ်ခုလုံး နှင်းပန်းဝါတွေ ဖုံးလွှမ်းသွားဖို့ဆိုတာ အတွေးသက်သက်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ မထင်ရပေမဲ့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာတဲ့ အခါမှာတော့ စိတ်ကူးသက်သက်ဟာ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖြစ်လာနိုင်ခဲ့ပြီ မဟုတ်ပါလား။ ဒီ ဥပဒေသလေးကို လက်ကိုင်ပြုပြီး ကျွန်မဘ၀မှာလည်း ကျွန်မဖြစ်ချင်တာတွေကို ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ ခွန်အားတွေ ရလိုက်ပါပြီ။ ကျွန်မကို ဒီနေရာ ရောက်အောင် ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ သမီး ဂျူလီ့ကို နှစ်နှစ်ကာကာ ကျေးဇူးတင်မိရင်းက ပြုံးပြလိုက်မိပါတော့တယ်။
ပုံတွေကိုမမြင်ရပေမယ့် စိတ်ကူးနဲ့ပဲ ကြည့်လိုက်တယ်။ အရမ်းလှတယ့်ရှုခင်းနဲ့ အတုယူသင့်တယ့် စကားလုံးတွေပဲ။
ပုံထဲက ပန်းခင်းကြီးကတော့အရမ်းလှတယ် ။ နှင်းတွေမရှိတာကလွဲလို့ပေါ့။